Ao amin'ny Hiverina - no anaty aterineto mampiaraka ny fomba tokony handeha?
Last nohavaozina: Mey. 25 2019 | 1
Raha vao haingana ianao niaina ny fisarahana, no mampiaraka an-tserasera ny fomba tokony Hiverina? Nanomboka tany amin'ny tontolo niaraka taorian'ny fifandraisana indraindray Tsy mora. Ny maha eo amin'ny Hiverina Sarotra, Fa soso-kevitra ireo no eto hitandrina anao soa aman-tsara!
Tsy miteny aho hoe ny zava-drehetra momba ny nandroaka ny lasa fifandraisana, fa mainka hanampy ny aterineto ny fifandraisanareo profile lasa. Ny olona te-hahafantatra raha nisara-panambadiana, voatokana, maty vady sns. Ka nanao hoe: zavatra toy ny, "Izaho no vaovao any amin'ny aterineto mampiaraka izao tontolo izao" dia OK hampiasa rehefa vaovao ho azy. Ny olona rehetra dia nisy fotoana vaovao!
Aoka ianao ho Malina
Toy ny tontolo ivelan'ny aterineto, mampiaraka ny aterineto izao tontolo izao feno cheaters, ny mpandainga, sns. Mitandrina rehefa mitady ao amin'ny mombamomba sy ny fandraisana andraikitra hafatra. Manomboka avy ary ho eo amin'ny Hiverina dia mety hitarika anao ho mora ny olona rehetra izay no hanome anareo ny saina. Mety hitarika ho amin'ny olana raha tsy mitandrina.
Aza manome ny vaovao rehetra
Misy antony iray mahatonga ny fiarahana amin'ny aterineto asa be dia be foana ny zavatra izay nafenina. Trano matoky olona iray Mila fotoana ny. Makà fotoana mba hahafantatra olona iray vao mahalala ny nomeraon-telefaonina, satria mety hanenenantsika izany taty aoriana.
Moa Namana Jereo Over Potentials
Raha tena liana amin'ny olona iray, sy ny Hiverina, jereo amin'ny namana tsara raha ny safidy ianareo kosa manao ny tsara. Friends dia mety ho marina eo anatrehanao tamin-kerisetra manao fahadisoana lehibe.